Rita, Writing for My Sake!: ဂျူး နှင့် ကိုင်ပေါက်ခြင်း
တင်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘဲ စိတ်ကူးပေါက်လို့ တင်မိတာ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီ တပတ်အတွင်းမှာ "http://www.scribd.com" က တိုက်ရိုက် ဖတ်လို့ ရတဲ့ စာအုပ်စာရင်းရှည်ကြီး တစ်ခု ပို့ပေးတယ် .. ဘယ်လောက် သဘောတွေ့သွားလဲ ဆိုတာ ပြောပြစရာတောင် လိုမယ် မထင်.. (နိုင်ဝင်းရေ ကျေးဇူး စကြ၀ဠာ.. Sweep 1st prize ပေါက်သလိုပါပဲကွာ)
အဲဒီထဲက ဂျူးရဲ့ "မြရဲ့ လ" ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်
ဒါကလဲ ကိုယ်က အညာသူကိုး.. အဲဒါကလဲ အကြောင်းတစ်ချက်ပေါ့
အကြောင်းအရာတခုကို အသဲအသန် ပုံစံနဲ့ စလာပြီး..တဖက်က အလေးအနက် တုံ့ပြန်တော့မှ...သဘောထားပဲ ကြီးသလိုလို...နားငြီးပဲ မခံနိုင်တော့သလိုလို...အဖက်ပဲ မလုပ်ချင်သလိုလိုနဲ့..ပြီးပြီးရော စကား ဖြတ်ပစ်တတ်တာလဲ ကိုယ့်အတွက်တော့ stupid work ပဲ
အဲဒါ သဘောထားကြီးတာ မဟုတ်ဘူး။ အနိုင်နဲ့ ပိုင်းတာလို့ ခေါ်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ တဖက်သတ်ကြီး ပြောချင်ရာပြော.. အပြောခံရတဲ့ တဖက်လူက ဘာမှန်းမှ မသိရ.. သေချာရှင်းပါဆိုတော့လည်း ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဟိုစကားလွှဲ ဒီစကားလွှဲ ...
သေချာလဲ သိခွင့်မရ.. ရှင်းဖို့လဲ အခွင့်အရေးမပေး...
ဒီလိုနဲ့ပဲ စတဲ့သူက ပြီးလွယ် ပျောက်လွယ် ၊ စိတ်သဘောထား ကြီးမြတ်သူလိုလို ဘာလိုလို...
အလကား နေရင်းထိုင်ရင်း ပြဿနာ အရှာခံရလို့ အကြောင်းရင်းကို သိအောင် ဇွတ်မေးတော့ မေးတဲ့သူကပဲ ရစ်တာ..ကြပ်တာ.. လျှာရှည်တာ.. မိန်းမပီသတာ.. စကားများတာ ဖြစ်ရပြန်ရော..
အဲဒီလို ယောက်ျားမျိုးတွေများ ကိုယ်တော့ ဂျူးရဲ့ အပေါ်က စာလုံးတွေ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်သာ ဖတ်ခိုင်းချင်တော့တာပဲ...
January တုန်းက တင်ပြီးသား post အဟောင်းကြီးပါ။
ခု ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ။
ဂျူး ရဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုလေ။
ဒီလို presentation မျိုး သူ ဘယ်လိုများ စဉ်းစားမိခဲ့ပါလိမ့်နော်...
၀တ္ထုတိုရော၊ ၀တ္ထုရှည်ရော ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ရေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကိုယ်တော့ တကယ်ပဲ အံ့သြချီးကျူးမိပါတယ်။
Posted by Rita at 9/25/2009 11:17:00 PM
ကိုယ်တော် နည်းနည်းတော့ အစွန်းရောက်နေပြီ
ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် မောင်နဲ့ရော ကိုကိုနဲ့ရာ ရဖို့မလွယ်
အမလဲ အဲလိုပဲ ခံစားခဲ့ရတယ်..။
တကယ်တော့ ယောင်္ကျားဆိုတာ အတ္တသိပ်ကြီးတယ်
ပီးတော့ ပြောလိုက်သေးတယ်..မင်းတို့မိန်းမတွေ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ခေတ်အဆက်ဆက်က လက်ပြောင်းယူခဲ့တဲ့ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ခံရတယ်
အစ်မရေ မြနဲ့ လ ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖူးပါတယ် ခုလည်းထပ် ဖတ်သွားတယ်ဗျ ... ကြိုက်ပါတယ် ဆရာမ ရဲ့ ဝတ္တုတွေကို။ မန့် တော့ မမန့် တော့ဘူးနော် .. :) လရောင်ကြောက်သူ ဆိုတဲ့တစ်ပုဒ် ရှိသေးတယ်ဗျ... အစ်မဖတ်ပြီးသာဖြစ်မှာပါ ....
ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မရီတာရေ ...
Sensible Rita လို့ပဲ ရီတာ့ကိုခေါ်တော့မယ်
“ကျွန်တော် မြကို နားလည်ခဲ့သည် ဟုများ တစ်ခါတုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်ခဲ့မိပါသလား။ ဒါဆိုလျှင် ကျွန်တော်သည် အလွန်မှားယွင်းသော လူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်” တဲ့..
မှားယွင်းရုံတင် ဘယ်က လိမ့်မလဲ။ နားလည်တယ် ထင်ရင် ရူးတာပဲ ဖြစ်မှာ။ တို့က မြရဲ့ response ကို သိပ်သဘောကျတယ်။ ဘာမှ မပြောဘဲ တသက်လုံး တမြေ့မြေ့ ခံစားပေတော့ပဲလေ။
အိပ်ယာဘေးမှာထားပြီး အမြဲဖတ်ခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်လေးပေါ့။ မြရဲ့ မြို့ကြီးအပေါ်မှာ မြင်တဲ့ အမြင်တွေက တထပ်တည်း ကျလွန်းလို့လေ။
အဲ့ဒီဝတ္ထုကို တို့လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်...
မြလိုပဲ တခါတခါ ခံစားရတယ် သူ့လိုတော့ သတ္တိမရှိသေးဘူး
ကျွန်တော်လည်း အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးပါ..
ကိုယ်ကတော့ ယောက်ျားဖြစ်နေလို့လားလို့မသိဘူး..တခါတလေ ဂျူးရဲ့ယောက်ျားတွေအပေါ်အမြင်ကို ရိတာလို ထင်းထနဲ မတွေ့ဘူး
မြရဲ့လ ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
Some of educated person (men) make self-defence.
Be sure to avoid.
မောင် ကိုကို နဲ့ မရီတာ လေ .. =)
အပေါ်က ဂျူးရဲ့ မြရဲ့လကိုလည်း ကြိုက်တယ်..
အောက်က ရီတာရဲ့ အနိုင်နဲ့ပိုင်းတာ ဆိုတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်.. :D
27 Sep 09, 23:46
ksg: ရာရာစစ။ ဂျူးနဲ့ ကိုင်ပေါက်ချင်သေးတယ်။ တောင်တောင်အီအီတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့။ သီတင်းကျွတ်တော့မယ်။
ရော်.. ဂျူးနဲ့ကိုင်ပေါက်တာများ.. ထူထူထဲထဲရှိတာနဲ့ ပေါက်ရောပေါ့.. မြရဲ့လ က ပါးသေးတာ.. ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ နဲ့ ပေါက်ထည့်လိုက်.. တခါထဲ မူးတွားမယ်..
1 Oct 09, 16:16
ပုလုကွေး: လာလည်ပါတယ်ဗျာ မရောက်တာကြာပေါ့ဗျ ကျားကြီးပုံနဲ့ ပိုစ်ကို မန့်ချင်ပေမဲ့ မမန့်တော့ဘူးဗျာ တစ်ခါတလေ မျက်နှာလွှဲပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်မယ်...